လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျတဲ့ ကွျောငွာကွောငျ့ ပွညျသူလူထုကို ဝနျခတြောငျးပနျခဲ့ရတဲ့ မျောတျောကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။ – SoShwe
Home/Tech/လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျတဲ့ ကွျောငွာကွောငျ့ ပွညျသူလူထုကို ဝနျခတြောငျးပနျခဲ့ရတဲ့ မျောတျောကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
WOLFSBURG, GERMANY - MAY 19: The Volkswagen logo stands outside the main administrative building of the Volkswagen brand at the Volkswagen car factory on May 19, 2017 in Wolfsburg, Germany. A state prosecutor in Stuttgart is reportedly investigating Volkswagen CEO Matthias Mueller over possible finanical markets manipulation in connection with the Volkswagen diesel emissions scandal. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျတဲ့ ကွျောငွာကွောငျ့ ပွညျသူလူထုကို ဝနျခတြောငျးပနျခဲ့ရတဲ့ မျောတျောကားကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။
So Shwe November 28, 2021	Tech Leaveacomment
Volkswagen ကုမ်ပဏီဟာ “VW Golf 8” နဲ့ပကျသကျပွီး မျောတျောယာဉျတှကေို ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ပရိသတျကွီးကို မွငျစလေိုတာကွောငျ့ ကွျောငွာတဈခု ပွုလုပျခဲ့ပွီး အဆိုပါကွျောငွာဟာ ကွညျ့ရှုသူပရိသတျရဲ့ ရငျထဲကို ကနျ့လနျ့ကွီးဝငျသှားတယျလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လကျတလောမှာ Volkswagen ကုမ်ပဏီက ရိုကျကူးထားတဲ့ ကွျောငွာထဲမှာ မွငျတှရေ့တဲ့ဇာတျလမျးဟာ လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျနတေယျလို့ တံဆိပျတပျခံရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘာကွောငျ့မြား လူတှကေ အဆိုပါကွျောငွာကို လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျတယျလို့ ဝဖေနျအပွဈရသလဲဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ကွျောငွာထဲက ဇာတျလမျးလေးကို အရငျဆုံးဖျောပွမယျနျော။ ကွျောငွာအစမှာ ဝတျစုံပွညျ့ဝတျဆငျထားတဲ့ လူမညျးအမြိုးသားဟာ အဖွူရောငျအသားအရညျရှိတဲ့ လကျတှရေဲ့တှနျးထုတျခွငျးကို ခံရပွီးနောကျ အဖွူရောငျလကျပိုငျရှငျတဈဦးက လူမညျးအမြိုးသားကို ရုပျသေးရုပျတဈခုလို ကိုငျတှယျပွီး စိတျတိုငျးကလြှညျ့ပတျစပွေီးနောကျ “Petit Colon” အမညျရှိ ကဖီးဆိုငျထဲကို ဆတျခနဲတှနျးခလြိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
“Petit Colon” ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ပွငျသဈဘာသာစကားနဲ့ ဂြာမနျဘာသာစကားတှကေနေ ကောကျယူထားတာဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျလိုဘာသာပွနျရရငျတော့ “Little Settler သို့ Little Colonist” လို့ အဓိပ်ပါယျရပွီး မွနျမာလိုဘာသာပွနျရရငျတော့ “ကိုလိုနီနိုငျငံမှာ သှားရောကျအခွခေသြူ” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကွျောငွာထဲမှာ လူမညျးအမြိုးသားတဈဦးနဲ့ လူဖွူအမြိုးသမီးတို့ကွားက ခဈြဇာတျလမျးလေးကို ကွညျနူးစရာကောငျးအောငျ စိတျဝငျစားဖှယျရိုကျကူးထားတဲ့ ကွျောငွာကို ဂြာမနီနိုငျငံအခွစေိုကျ မျောတျောယာဉျပစ်စညျးထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ Instagram အကောငျ့နဲ့ Facebook မှာ ပွသပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ Volkswagen ဟာ မထငျမှတျထားတဲ့ အပွဈတငျဝဖေနျမှုတှကေို အပွငျးအထနျ ခံလာရပါတယျ။
အဆိုပါကွျောငွာကို ကွညျ့ရှုလိုကျရတဲ့ လူမှုကှနျရကျအသုံးပွုသူတျောတျောမြားမြားဟာ Volkswagen ကုမ်ပဏီရဲ့ ကွျောငွာမှာပါဝငျတဲ့ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှဟော လူမြိုးရေးခှဲခွားဖိနှိပျမှု အဓိပ်ပါယျဆောငျနတေယျလို့ မှတျခကျြပေး အပွဈတငျဝဖေနျခဲ့ကွတဲ့အပွငျ လူတဈခြို့ကတော့ “Volkswagen က ထုတျလုပျတဲ့ မျောတျောယာဉျတှကေို ဘယျတော့မှ ဝယျယူတော့မှာမဟုတျဘူး။” လို့ ပွောဆိုခဲ့တဲ့အထိ အခွအေနတှေကေ ဆိုးရှားလာခဲ့ပါတယျ။
Volkswagen ကုမ်ပဏီ အရောငျးဌာနက ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသူ Jürgen Stackmann က သူ့ရဲ့ Twitter အကောငျ့မှာ “မုနျးတီးခွငျး ၊ လူမြိုးရေးခှဲခွားခွငျးနဲ့ ခှဲခွားဆကျဆံခွငျးတှကေို Volkswagen ကုမ်ပဏီက အားမပေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီပွဿနာရဲ့နောကျဆကျတှဲအခွအေနကေို ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးသှားပါမယျ။”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
Volkswagen ကုမ်ပဏီက ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတှကေ အဆိုပါကွျောငွာကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈခဲ့ရသူ တဈဦးခငျြးစီကို အနူးအညှတျတောငျးပနျကွောငျး နဲ့ အဆိုပါကွျောငွာမှာ ပါဝငျတဲ့ဇာတျလမျးဟာ လူမြိုးခွားမုနျးတီးဖိနှိပျမှုကို အဓိပ်ပါယျမဆောငျကွောငျး ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
လူမျိုးခြားမုန်းတီးဖိနှိပ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တဲ့ ကြော်ငြာကြောင့် ပြည်သူလူထုကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့ မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
Volkswagen ကုမ္ပဏီဟာ “VW Golf 8” နဲ့ပက်သက်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မြင်စေလိုတာကြောင့် ကြော်ငြာတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါကြော်ငြာဟာ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲကို ကန့်လန့်ကြီးဝင်သွားတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်တလောမှာ Volkswagen ကုမ္ပဏီက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကြော်ငြာထဲမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ လူမျိုးခြားမုန်းတီးဖိနှိပ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နေတယ်လို့ တံဆိပ်တပ်ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်များ လူတွေက အဆိုပါကြော်ငြာကို လူမျိုးခြားမုန်းတီးဖိနှိပ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တယ်လို့ ဝေဖန်အပြစ်ရသလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကြော်ငြာထဲက ဇာတ်လမ်းလေးကို အရင်ဆုံးဖော်ပြမယ်နော်။ ကြော်ငြာအစမှာ ဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ လူမည်းအမျိုးသားဟာ အဖြူရောင်အသားအရည်ရှိတဲ့ လက်တွေရဲ့တွန်းထုတ်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် အဖြူရောင်လက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက လူမည်းအမျိုးသားကို ရုပ်သေးရုပ်တစ်ခုလို ကိုင်တွယ်ပြီး စိတ်တိုင်းကျလှည့်ပတ်စေပြီးနောက် “Petit Colon” အမည်ရှိ ကဖီးဆိုင်ထဲကို ဆတ်ခနဲတွန်းချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“Petit Colon” ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ ဂျာမန်ဘာသာစကားတွေကနေ ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရရင်တော့ “Little Settler သို့ Little Colonist” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်တော့ “ကိုလိုနီနိုင်ငံမှာ သွားရောက်အခြေချသူ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြော်ငြာထဲမှာ လူမည်းအမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ လူဖြူအမျိုးသမီးတို့ကြားက ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည်နူးစရာကောင်းအောင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကြော်ငြာကို ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက် မော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Instagram အကောင့်နဲ့ Facebook မှာ ပြသပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Volkswagen ဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကို အပြင်းအထန် ခံလာရပါတယ်။
အဆိုပါကြော်ငြာကို ကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ Volkswagen ကုမ္ပဏီရဲ့ ကြော်ငြာမှာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အဓိပ္ပါယ်ဆောင်နေတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေး အပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် လူတစ်ချို့ကတော့ “Volkswagen က ထုတ်လုပ်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ဘယ်တော့မှ ဝယ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူး။” လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အထိ အခြေအနေတွေက ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။
Volkswagen ကုမ္ပဏီ အရောင်းဌာနက ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Jürgen Stackmann က သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှာ “မုန်းတီးခြင်း ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတွေကို Volkswagen ကုမ္ပဏီက အားမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားပါမယ်။”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Volkswagen ကုမ္ပဏီက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေက အဆိုပါကြော်ငြာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရသူ တစ်ဦးချင်းစီကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ကြောင်း နဲ့ အဆိုပါကြော်ငြာမှာ ပါဝင်တဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ လူမျိုးခြားမုန်းတီးဖိနှိပ်မှုကို အဓိပ္ပါယ်မဆောင်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Previous ဧရာမမိကြောငျးကွီးတဈကောငျကို အခြိနျကိုကျစောငျ့ဖမျးခဲ့သညျ့ အမြိုးသားတဈဦး။
Next Tinder Dating App ကနေ အကောငျ့ဖယျရှားခံရတဲ့ အသကျ၂၁ နှဈအရှယျ မိနျးကလေးရဲ့အဖွဈ။